Isbarbardhiga u dhexeeya ArcGIS iyo SuperGIS (iminka Isbanish) - Geofumadas
Luulyo, 2013 ArcGIS-ESRI, tabo cusub, SuperGIS
Waxaan marwalba jeclaan lahaa isbarbardhigga, kiiskan iyo munaasabadda lagu dabaaldegayo in SuperGIS horeyba loo heli karo Isbanishka, waxaan ku tusi karnaa isbarbardhiggan ka dhexeeya ArcGIS iyo SuperGIS ee qaababka ay u shaqeeyaan. In la caddeeyo qaar ka mid ah dhinacyada isbarbardhigaya, codsiyada kale ee ESRI / Supergeo aan aragno isbarbardhigyada mustaqbalka.
Isbarbardhigida hawlaha u dhaxeeya ArcGIS iyo SuperGIS
Shaqeynta SuperGISHeerka SuperGISProfes. ArcGISAsaasiga ah ArcGISAvanz.
Taageero noocan ah X X X X
Sawirka: SHP, MIF, DXF, GML, DWG DGN V8, iwm. X X X X
Raster: MrSID, GeoTIFF, BMP, GIF, JPG, JPG2000, ECW, PNG, LAN, GIS, iwm. X X X X
Marka loo eego heerka OGC (WMS, WCS, WFS, WMTS) X X X (maya WMTS) X (ma aha WMTS)
Qalabka wax u beddelka macluumaadka (sida DXF ilaa GEO) X X X X
Qalabaynta nidaamka saxda ah ee isbarbardhigga ah (juqraafi juqraafi ah) X X - -
Abaabulida iyo muuqaalka xogta
Abuuri, beddel oo falanqee xogta jimicsiga
Abuuri khariidado iyo shaashado dhexdhexaad ah X X X X
Abuur calaamadaha astaamaha
Xaji daaha OpenStreetMap
Jadwalka Horukacsan (tusaale khadadka siman, fududaynta, iwm.)
Tifatiraha Qaybta X X
Naqshadeynta muuqaalka juqraafiyada X X X X
Kala shaqeynta macluumaadka ee block
Isbedelka Rear to Vector
Ka sheekaysiga nooca geometry X X
Qor (Access MDB, SQL Server, PostgreSQL, Oracle Spatial)
Isticmaal badan oo ka mid ah macmiilka ayaa isku beddelaya fasalka muraayadda ee Geodatabase VV X X
Isku dayinta xogta ka timid serverka
Samee kaydka khariidada
Deegaanka la qaabeeyey
Plugin loogu talagalay xogta GPS-ka ee kala duwanaansho (Rinex)
Falanqeeyaha Qiimaynta Muuqaalka
Falanqeeyayaasha kala duwan ee bayoolojiga X X
Waxaa xiiso leh in la arko sida loo isticmaalo SuperGIS, halkii uu abuuri lahaa farsamooyinka shaqsiyadeed, waxay raadineysaa inay sameeyaan dadka isticmaala horayba u yaqaan ArcGIS 10, sida lagu arkay miiska hore.
Labada dhinacba, ArcGIS iyo SuperGIS, keliya kordhinta falanqaynta topolojiga ayaa lagu daray qaybta, kuwa kale waxay u baahan yihiin in si gooni ah loo iibsado.
Fiidiyowga soo socda ayaa muujinaya isdabajooga labadaba, halkaas oo isla habka loo qabto labada barnaamijba.
Gebogebada, waxa la sameeyaa labada barnaamijba way isku mid noqon karaan, qaybaha qaarkood xitaa SuperGIS way ka badan tahay.
Marka la eego qiimaha: Kharashka SuperGIS wax ka yar kala badh ka mid ah ArcGIS.
Marka la eego munaasabadda kale, farxad aad u weyn ayaan ku helnay nooca ugu dambeeya ee SuperGIS 3.1a ee ku saabsan in la sii daayo bishan, mana aha wax la yaab leh oo ku qanacsan in la ogaado:
Hore waxay ku jiraan luqadda Isbaanishka
Waa inaan qirayaa inaan rabno inaan ogaanno SuperGIS dhowr bilood ka hor waxay dhiirigelisay rabitaanka ah inay galaan suuqa Spanishka si ay ula tartamaan ESRI. Iyo in waqti yar oo ay ku daray luuqadeena ... waxay muujinaysaa gardarrada qalab ah oo ku dhashay Taiwan, laakiin taasi waxay si fiican u dhigtaa Aasiya iyo Bariga Dhexe.
Sida loo badalo luqadda SuperGIS
Tani waa inaad sameysid:
Oo halkan ka dooro tabka Local.
Tarjumaadda: Waa fiicantahay wanaag.
Nidaamkeena Hispanic, tartanka waa mid wanaagsan, ugu dambeyntii guuleystaha waa isticmaalaha, tan iyo markii uu jiro barnaamijka tartan ee qiimaha hoose iyo korriinka barnaamijka bilaashka ah uu ku leeyahay shirkad gaar ah si ay uga shaqeyso adeega badan oo aan ka faaiidaysaneynin suuqa kala iibsiga.
Sidee ayuu u fiican yahay SuperGIS, waxa fiican ee nooca Hispanic.
Soo rogo SuperGIS Desktop
Post Previous«Previous Machadka Tifaftirka ah ee horumarinta wadamada Maraykanka
Post Next Tusaalaha Cadastral: WebinarNext »
3 Jawaab ah "Isbarbardhiga u dhexeeya ArcGIS iyo SuperGIS (hadda Isbaanish)"
Jayala isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan raadinayaa koorso khaas ah arcGIS loogu talagalay cadawga hantida
ku samee Ecuador
Taasi waa Fernando. Maqaal kale waxaan ku qiimeyn doonaa aaladaha kale iyo kordhinta.
Fernando Paredes isagu wuxuu leeyahay:
Dhaqdhaqaaqyada Muuqaalka oo kaliya ayaa la barbardhigayaa. ArcGIS Desktop waxay leedahay faahfaahin dheeraad ah oo aan la sheegin. ArcGIIS Server, ArcGIIS Online, ArcGIS Runtime ee loogu talogalay horumarinta goobo kasta (Android, IOS, iwm) ama hadal.
Mid kastaa ha soo baxo go'aankooda gaarka ah ee ku saabsan waxa la barbar dhigi karo iyo waxa aan ahayn. ArcGIS waxay muddo dheer ka joogtay inay noqoto alaab si ay u noqoto meel udub dhexaad u ah ururada kaabayaasha farsamada, maadooyinka looga baahan yahay falanqaynta iyo codsiyada si ay uga faa'iidaystaan ​​macluumaadka labadaba khabiirada GIS iyo isticmaalayaasha kuwaas oo si fudud u baahan khariidado farsamo si ay u qaataan Go'aamo wanaagsan maalintaada, maalinta.